Nyora vhezheni itsva 72 yeGoogle Chrome pasina rutsigiro rweChromecast | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura Google yakatanga chirongwa chitsva cheiyo Chrome 72 yewebhu browser uye kuti panguva imwechete, yakagadzikana vhezheni yemahara Chromium chirongwa chiripo, inova hwaro hweChrome.
Chrome browser inomira pakushandisa marogo eGoogle, kugona kurodha pasi Flash module pane zvinodiwa, kuwanikwa kweye ziviso system mune chiitiko chekutadza, ma module ekutamba akachengetedzwa zvemukati zvemavhidhiyo, iyo sisitimu yekumisikidza yekumisikidza marongero uye kupfuura RLZ parameter kana uchitsvaga.
De Shanduko huru dzinowanikwa mune iyi vhezheni nyowani ndidzo dzakagadzirwa mugadziriro.
Zvirongwa zvekuzadza auto-minda zvakakamurwa kuita zvikamu zvakati wandei manejimendi manejimendi-ekuzadza minda-pasi, mafomu ekubhadhara, uye kero.
1 Chrome 72 nhau huru
1.1 Iyo Android vhezheni yakagamuchirawo kuvandudzwa uye izvi ndizvo
2 Maitiro ekuwana Google Chrome 72?
Chrome 72 nhau huru
Iyo nzira yekudimbudzira yakawedzerwa kuti ikurumidze kufamba kuenda kuGoogle account marongero.
Pfungwa isina kunaka yekusimbisa mune iyi nyowani vhezheni yeChannel 72 ndeyekuti ivo vagadziri vakaita sarudzo yekumisa rutsigiro kweCgadzira kubatana kwe Chromecast zvishandiso kubva kubhurawuza uye vanotikurudzira kuti tishandise yakasarudzika application yekugadzirisa.
Kana ongororo yapfuura yakatora ingangoita 9,5% yenguva yeinjini yeV8, ikozvino nhamba iyi yadonha kusvika pa7,5%, yaive nemhedzisiro yakanaka pakumhanya kwemapeji ekuvhura uye kupindurwa kwechimiro.
Iyo nguva inodikanwa yekuongorora Facebook zvinyorwa yakaderedzwa kubva pa270 ms kusvika 170 ms.
Kune rimwe divi, tinozviona izvozvo akawedzera API mushandisi wekushandisa kubvunza kuona kumisikidzwa kwemamwe mabasa, yakaremara nekutadza musati mushandisi atanga kuwirirana neiyo peji.
Semuenzaniso, iye anovandudza anogona kuona kuti iko kuwana kwemabasa ekuchinjira kune yakazara skrini mode, otomatiki kurira kurira uye kuvhura yekuwedzera windows yaonekwa.
Kuitwa kwekumisikidza kunoitwa kuburikidza neye mushandisiActivation chivakwa, icho chinopa maviri ma parameter aneBeenActive uye isActive izvo zvinokutendera iwe kuti uone kana mushandisi apindirana neiyo peji kana kana rakangoremerwa uye richiramba rakamira.
Chekupedzisira, chimwe chinongedzo chekuburitsa mu desktop desktop yeiyo browser ndeyekuti yakagoneswa nekutadza iko kugona kuona mavhidhiyo nezve zvemukati muPikicha-Mune-Mufananidzo modhi, iyo inobvumidza iwe kuti uparadzanise vhidhiyo iri muchimiro chehwindo rinotenderera, iro rinoramba richioneka kana uchifamba mubrowser.
Kuti utarise vhidhiyo yeYouTube mune ino modhi, tinya-kaviri vhidhiyo nekomboni bhatani uye sarudza iyo "Mufananidzo-mu-Mufananidzo" maitiro.
Iyo Android vhezheni yakagamuchirawo kuvandudzwa uye izvi ndizvo
Para Iyo Android vhezheni yewebhusaiti inowedzera kugona kuwedzera mamwe mainjini ekutsvagisa.
Uyewo zvakare kugona kuvhura skrini ine runyorwa rwemapeji akambovhurwa mune yazvino tebhu Yakawedzerwa kuburikidza nekumirira kwenguva refu nekudzvanya bhatani rekudzoka kune peji rapfuura.
Wakawedzera yekuyedza dhizaini modhi "Chrome Duet", mune iyo dhizaini yemapaneru inoshanduka uye menyu inofamba ichienda kune yepazasi pani (kuisanganisira iyo chrome: // mamaki, iwe unofanirwa kumisikidza iyo "chrome-duet" sarudzo).
Maitiro ekuwana Google Chrome 72?
Nekuda kwekuzivikanwa kukuru dIri webhu browser rinowanikwa pane mazhinji aripo ekuparadzira Linux.
Kunze kweizvozvo, kana iwe uchitova nayo iyo yakaiswa, bhurawuza iri richagadzirisa zvoga
Kana iwe usina iyo yakaiswa, unogona kuenda kune yayo yepamutemo webhusaiti kuti uwane mugadziri weizvi.
Pakupedzisira zvakakoshawo kutaura izvozvo Iyo inotevera vhezheni yeChannel 73 yakarongerwa kuburitswa munaKurume 12.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Nyora nyowani vhezheni 72 yeGoogle Chrome isina rutsigiro rweChromecast